Maamulka Somaliland oo Bulshada Laascanood ka Mamnuucay Shirarka Dadweynaha. • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Maamulka Somaliland oo Bulshada Laascanood ka Mamnuucay Shirarka Dadweynaha.
Maamulka Somaliland ayaa amar kasoo saaray kulamada & shirarka ay bulshada rayidka ah ee Gobolka Sool uga arinsanayaan howlahooda,sida ka tashiga xaaladda coladeed ee ka tagan degaanka uu haysto Maamulka Somaliland,xulista xildhibanada Puntland iyo shirarka kale ee ay yelanayaan odayasha dhaqanka iyo bulshadu.
Gudoomiyaha Gobolka Sool Cabdirashiid Xuseen Cabdalle (Gargaar) ayaa war qoraal ah oo uu soo saaray ku mamnuucay in aan shirar lagu qaban karin Hotelada Waweyn ee Magaalada Lascanood ,waxaana uu qoraalkiisa ku sheegay in wixii kulamo ah ee la qabanayo fasax looga qaato.
Maamulka Somaliland ayaa Magaalada Laascanood ka wada howlgalo ay ku caburinayaan qaybaha kala duwan ee bulshada degaanadda Gobolka Sool,iyadoo magaalada ay kusuganyihiin ciidamo lagu sheegay in ay ka shaqaynayaan kahortaga kacdoonada iyo mudaharadyada ka dhanka ah Maamulka Somaliland oo mudo gacanta ku hayey Magalada Laascanood.
Halkaan ka dheeho warqadda uu soo saaray Gudoomiyaha Gobolka Sool.